Okwu ole ka akwụkwọ ozi kwuru ziri ezi? | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 13, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kudos ka Indy Confluence maka itinye na a oké IZIRingTA omume ebe a na Indianapolis yesterdaynyaahụ. N'adịghị ka ọtụtụ ihe ịkparịta ụka n'ingntanet, Indy Confluence nke Brett Healey duziri na Erik Deckers, webatara ndị otu folks ebe a na mpaghara iji nye ndị otu niile ndụmọdụ bara uru. Isiokwu ọnwa a bụ Gịnị kpatara Corporate Blogging Critical to a Company's Success? A kpọrọ m ka m nọrọ na ngalaba ahụ.
Ndị otu ahụ mejupụtara Chris Baggott, Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Nwachukwu na m.
Ọ bụ nnukwu mkparịta ụka mana otu isiokwu nọgidesiri ike na craw: Ole okwu ole blog kwesiri inwe?.
Mkparịta ụka ahụ gara na tebụl niile, ọtụtụ ndị ọkà okwu kwasiri ike maka pithy posts ma tinye nọmba 250 okwu dị ka ezigbo. Dị ka 'blog ogologo' blogger, ndị otu m na-akwado m.
Maka ndị na-agụ blọgụ m, ị maara na enweghị m ike ịdebe post blog na okwu 250 (post a bụ ezigbo ihe atụ). Enweela m ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ, ntinye akwụkwọ nyocha ọfụma, yana ọnụ ọgụgụ na - arịwanye elu nke ndị debanyere aha - ma anaghị m akwụ ụgwọ! M nyochaa ọnụ ọgụgụ nke okwu kwa post ma jiri ya tụnyere biputere ewu ewu na blọgụ nke m ma ọ nweghị mgbe m nwetara mmekọrịta.
Oge a, ekpebiri m ileba anya na blọọgụ ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị blọọgụ ọ bụla. Ahọrọ m nsonaazụ 5 kacha elu na Google mgbe ị na-achọ De blọgụ maka SEO. Echere m na onye ọ bụla nọ na njedebe nke agha ahụ ga-enwe nkwekọ na ọkwa ha nke nwere ike inye m nghọta. Ise blọọgụ enyocha bụ SEOmoz, SEO maka Google, Blog Ahịa Online, Blogta Hittail, Na Blog Blog kwa ụbọchị.
Ebe blọọgụ ndị a nọ na nsonaazụ ọchụchọ dị elu, ana m eche na ha abụọ ewu ewu ma dịkwa mkpa. M wetara ikpeazụ 10 blog posts kwa blog maka ngụkọta nke 50 blog posts. Nke a abụghị, ọlị, sayensị mana ekwenyere m na nsonaazụ ahụ kwughachiri ihe m kwuru n'agha.
Okwu site na nzaghachi Post:
SEOmoz nwere nkezi nke okwu 832.3 kwa post na median nke 512.5 okwu kwa post.
SEO maka Google nwere okwu 349.7 site na post ọ bụla na okwu 315 na post ọ bụla.
Blogs dị elu nwere nkezi nke okwu 742.5 kwa post na etiti nke 744 okwu kwa post.
Hit Tail Blog nwere ihe ruru 255 okwu kwa post site na etiti nke 233 okwu kwa post.
Blog Blog SEO kwa ụbọchị nwere nkezi nke okwu 450.8 kwa post na etiti nke 507 okwu kwa post.
Nsonaazụ ikpeazụ bụ nkezi nke 526 okwu kwa post na etiti nke 447 okwu kwa post. N'ime posts 50 tụrụ (10 kwa blog), naanị 6 n'ime ha erughị okwu 250. N'oge gara aga, egosiputala m na nha post ahụ emetụtaghị ọgụgụ nke blọgụ m. Ugbu a, m ga-ekwu ya ọzọ, ndụmọdụ m nwere maka Words kwa Post bụ nke a:
Ọnụọgụ nke okwu ị dere n'otu post kwesịrị ịbụ ọnụ ọgụgụ nke okwu ọ ga - ewe iji mezue isi ebumnuche post. Aga m agbakwunye na ọnụ ọgụgụ okwu kwa post kwesịrị ịdịtụ iji kwado atụmanya nke ndị na - agụ akwụkwọ ugbu a. Anaghị m agụ ọnụọgụ mkpụrụ okwu - A na m ejide n'aka na ọ bụrụ na mmadụ hụrụ blọgụ m site na nyocha nchọta na ha nwetara ihe ha bịara.
Tags: ọnụ ọgụgụ nke okwuokwu ọnụ
Nov 13, 2008 na 1:09 AM
Ihe omuma a bu ihe ohuru nye m. M na-ekewa otu isiokwu mgbe niile n'ọtụtụ posts mgbe ọ buru oke ibu n'ihi na achọghị m ka ndị na-agụ akwụkwọ m nwee mmụọ dị egwu nke ịpịgharị ụjọ. Onwe m, achọghị m saịtị m ga-agbadata. Ka o sina dị, ị gosipụtara ihe ndị na-adọrọ mmasị ebe a. Ikekwe, ekwesịrị m ịmechaa otu isiokwu n'otu ọkwa n'agbanyeghị na ọ ga-ewe karịa okwu 2500. Daalụ maka ikenye dị otú ahụ na-akpali isiokwu.
Nov 13, 2008 na 9:41 AM
Ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ dị mkpa ma baa uru, dị ka nke gị, Doug, mgbe ahụ ogologo adịghị mkpa. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na onye na-ede blọgụ na-ekwu okwu naanị ka ọ nụrụ ka ọ na-ekwu okwu (nke na-abụkarị okwu ahụ, ọ dị nwute), nke ahụ bụ okwu ọzọ!
Nov 13, 2008 na 10:06 AM
A blog post kwesịrị inwe ọtụtụ okwu dị mkpa iji mee ka isi ihe gị gafere.
Onweghi ihe ikwu? Enweghị isi = 0 okwu
Ikekwe ihe ị ga-ekwu bụ ahịrịokwu. Ma ezigbo ikpe! Nwere ike ịkwụsị na akwụkwọ nke ruturu, maka ime mpụ!
Akamba abụba akpa ikuku, ma akpa ikuku na-adọrọ mmasị = dee na! Hapụ ya. Ikwusi! Iche! Dịrị! Kedu onye chọrọ ịma ole okwu ???? Ọ bụrụ na ọ na-eme ka obi dị gị mma, mee ya! (Nke a bụ maka ndị na-abụghị ọkachamara blogger.)
Ndị mmadụ ga-agụ ogologo posts Ọ B IFR IF na echiche ndị ahụ siri ike iji dọpụta ha… ọ bụrụ na ederede adịghị mma, enweghị okwu ma ọ bụ ụkọ okwu nwere ike ịchekwa post ahụ.
Nov 13, 2008 na 9:58 AM
Isi ebe a abụghị ọdịnaya kama ọnụọgụ nke ọtụtụ okwu? Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo ọdịnaya, ndị mmadụ ga-ejikọ gị wee si otú a nye gị ikike Google, ma ọ bụ mee ka mkparịta ụka ahụ dịrị na nkwupụta ma si otú a nye Google echiche na emelitere weebụsaịtị gị oge niile. Ọ dịkwa mfe ịnweta ọdịnaya dị mma karịa karịa 250 okwu. Ka obu ihe na-efu?
Nov 14, 2008 na 10:13 AM
N'ihi na folks ndá »‹ blogged n'ihu, Echere m na nke a bá »no a brainer na á» dá »‹ naya bu eze. Agbanyeghị, na blogger ma ọ bụ ụlọ ọrụ oge mbụ na-eche echiche banyere ịde blọgụ, nke a bụ ajụjụ na-abịa mgbe niile yabụ na ọ dị mkpa ka anyị zaa ya.
Nov 13, 2008 na 10:04 AM
"Ọnụ ọgụgụ okwu ị na-ede kwa post kwesịrị ịbụ ọnụ ọgụgụ nke okwu ọ ga - ewe iji mezue isi okwu?"
Nke ahụ bụ ndụmọdụ kacha baa uru m gụrụla n’okwu a.
(N'ezie, dị ka onye na-ede kama ogologo posts m na-eme ihe na-adịghị mma 🙂)
Ndị na - agụ blọgụ m na - ekwu mgbe niile na ọ masịrị m ide ederede, yabụ agaghị m agbanwe ya n'ihi na ụfọdụ na - ekwu okwu 250 kwesiri ịdị max (ọ na - enyekwa ezigbo ngwakọta nke isiokwu maka SE kwa).
Ozi gị juputara na ozi dị mma yana ọgụgụ dị mma, yabụ ee, ndụmọdụ dị mma: esola 'ụkpụrụ a nabatara'; chọta ihe kacha arụ ọrụ maka gị ma kwụsị ịgụta okwu 🙂
Nov 14, 2008 na 8:08 AM
M gbalịrị ime nke a mgbe anyị na-ekwu okwu banyere isiokwu na panel na Confluence. Na-eme ya na Klas ọzọ. 🙂
@Cynthia Hụ eziokwu ahụ i kwuru n'anya, Rant, na Rave. Ihe ogugu kachasi di na blog bu mgbe m na-acho ihe. 🙂
Nov 14, 2008 na 10:16 AM
Enwere otutu ihe omuma na ulo oru a ma odighi onye nwere mgbagha anwansi! Google ka na-enye m nsonaazụ ọchụchọ ọjọọ mgbe ụfọdụ na oge ndị ọzọ ana m asọ oyi na-ede akwụkwọ nke ọma.
Echere m na ọ dị mkpa ịhapụ 'echiche' ya na ụfọdụ data iji kwado ya! Anyị ka na-amụ ihe.
Ọmarịcha SEO n'ọnụ
Feb 14, 2011 na 10:38 PM
Ezigbo ozi! Daalụ maka ịkekọrịta ya.
Ọkt 19, 2011 na 8:59 AM
Ọkt 19, 2011 na 1:59 PM
Ọkt 19, 2011 na 2:47 PM
Ọ dịghị ihe dị ka iji data na-achịkwa echiche. My echiche m na isiokwu (blog ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ) bụ "Ezi Ide merie!" Ihe ka mma ide ederede (ụtọ asụsụ, ọdịnaya, ịkọ akụkọ, wdg) ogologo oge m ga-agụ ya.
sally aja aja
Dee 2, 2011 na 1: 41 AM
Daalụ maka post a n'ihi na m na-anwa ịkọwapụta nke a. Ọtụtụ n'ime posts m sitere na 350 ruo 450 okwu kwa post. Amaara m mgbe m gara na blọgụ na ihe karịrị okwu 500, naanị m gafere ya. Anaghị m eche na ọtụtụ mmadụ nwere mmasị ịgụ blọgụ ogologo. M na-agbalị ka m ghọta ihe m na-erughị narị okwu ise. Ikekwe m na-emehie. Ka o sina dị, ọ bụ naanị echiche m. Sally
Dec 4, 2011 na 9:47 PM
Ekwenyesiri m ike na ndị folks na-agụ obere. Anyị na-amanye ndị ahịa anyị ka ha jiri akara aka, ihe onyonyo dị mma, ma nwee obi ike ma mesie ike ebe ọ bụla ha nwere ike ijide 'skimmers'. Ọ bụrụ na ị na-agbanwe agbanwe, Echere m na ihe dị mkpa karị… ka ndị mmadụ wee nwee ike ịtụ anya otu ihe na nleta ọ bụla.
Dec 15, 2011 na 1:25 PM
N'ọnwa gara aga na mkparịta ụka ya na ọtụtụ ndị enyi Allison Carter na Jeremy Zucker duziri, e mechara ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke okwu kwa post ka ị na-ekwu, "ọnụọgụ nke okwu ọ ga - ewe iji mezue isi ebumnuche post."
matt na -atụ egwu
Mee 7, 2012 na 3: 13 PM
Anọ m na-achọ nọmba anwansi, achọtara m azịza ziri ezi! Daalụ, matt
Jun 2, 2012 na 9:59 AM
Ọnụọgụ nke okwu ị dere n'otu post kwesịrị ịbụ ọnụ ọgụgụ nke okwu ọ ga - ewe iji mezue isi ebumnuche post.
Mee 1, 2013 na 2: 46 PM
Nke a nwere enyemaka nke ukwuu. Daalụ. Ugbu a ụjọ anaghị atụ m ma ọ bụrụ na m kụrụ okwu 600. Gịnị bụ echiche dị na onyonyo?
Mee 1, 2013 na 3: 35 PM
Ihe oyiyi dị oke egwu! Ọ bụghị naanị ịkọwa isiokwu ndị siri ike kamakwa iji nyere aka dọta ndị na-agụ akwụkwọ na ọdịnaya gị ma nyere ha aka icheta ya. -
Glynn Hodges kwuru
Jun 9, 2013 na 8:58 AM
Ezi ozi bara uru. Echere m na ihe karịrị narị okwu asaa ga-eme ka onye na-agụ ya funahụ ya. Daalụ maka inye akwụkwọ ahụ.
Ndewo, Nnukwu ọkwa, daalụ.
nke a agbanweela ka oge na-aga? ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ data ndị ọzọ dị ugbu a.
Ekwenyesiri m ike na ọ nwere, @ mikemorrison1: disqus, ọ bụ ezie na ederede m agbanwebeghị nke ukwuu. Ngwunye ọchụchọ na-enwe ekele maka posts 'nke ka sie ike' ugbu a na ọtụtụ ụdị mgbasa ozi, ederede ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ (ederede edeturu, isiokwu nta, wdg)
Mee 16, 2014 na 2: 17 PM
Enweghị iwu siri ike na ngwa ngwa ole okwu kwa post ziri ezi. Nke ahụ dabere na isiokwu nke post, ole post ọ dị mkpa ka a kọwaa ya n'ụzọ zuru ezu. Edemede ahụ nwere ike ịnwe edemede dị iche iche dịka ụfọdụ post bụ obere, ọkara na ọdụ ogologo. A kọwara otu ụkpụrụ a na post a bụ akara nwere okwu 832.3 site na post ọ bụla yana okwu 512.5 kwa post. Top blog blọọgụ nwere nkezi 742.5 okwu kwa post na median nke 744 okwu kwa post.
Ọkt 12, 2014 na 12:57 PM
nke a ka bu ihe omuma nke ugbua?
Ọkt 12, 2014 na 1:17 PM
Anyị etinyebeghị nyocha a ọtụtụ afọ mana ọ nwere ike ịbụ oge. Ekwenyere m na Google na-ele anya karịa na "thicker" peeji nke nwere ọtụtụ okwu kwa ibe karịa n'oge gara aga. Akwụkwọ ndekọ aha na-agbanwe n'ọkwá nke ọma na afọ ole na ole gara aga. Anyị na-anwa ịnwe opekempe nke okwu 250 ma gbalịa n'ezie iji kụọ 500 ruo 1000 okwu na posts anyị na-anwa ịkwado.